Maxaad ka taqaan Shaxda ama Tiirka Qoyska Col. Muamar Al Qadaafi ? – SBC
Maxaad ka taqaan Shaxda ama Tiirka Qoyska Col. Muamar Al Qadaafi ?
Col. Muamar Al-Gadaafi wuxuu ahaa hogaamiyaha Liibiya mudo 42 sano ah waxaa isaga qoyskiisa ay kaalin weyn ku lahaayeen awooda maamul , dhaqaale, bulsho & siyaasadeed ee wadanka Liibiya, waxay kaloo ka ahaayeen aduunka caan isla markaana xukunka & hantida wadanka si weyn ugu najaxay.
Shaxdan waxaan idinkugu soo gudbinayaa qoyska Col. Qadaafi sida ay isu dhaleen & taariikh kooban tani oo ah codsi fara badan oo inooga yimid akhrisyaasha SBC.
Col. Muamar Al- Qadaafi
Halka uu ku sugan yahay: Lama yaqaan
Jagada loo aqoonyahan yahay: Hogaamiye
Wuxuu ku dhashay magaalada Sirte ee Liibiya bishii 7-dii bishii June 1942
Waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatey Liibiya, Giriiga & UK
Xukunka wuxuu xukunka qabsadey afgambi aan dhiig ku qaban 1-dii September 1969
Wuxuu guursadey laba xaas wuxuu dhaley 7 wiil & gabar
Col. Qadaafi wuxuu ahaa hogaamiyihii Afrika ee ugu xukunka dheeraa ee ka mid ah wadamada Carabta.
Fatiha: Xaaskii ugu horeysay ee uu guursado Col. Qadaafi
Halka ay ku sugan tahay: Lama yaqaa
Fatiha waxay aheyd xaaskii ugu horeysay ee uu guursado Col. Qadaafi waxay aheyd macalimad Iskool markii ay isguursanayeen, waxay u dhashay hal wiil oo ah wiilka curadka ah ee lagu magacaabo Muxamed, Fatiha & Col. Qadaafi waxay is fureen lix bil ka dib markii ay wiilka dhashay, wax badan haweenaydan lagama yaqaan.
waxay u baxsatey wadanka Al-Jeeriya markii mucaaradku ay qabsadeen magaalada Tripoili
Safia Farakash waa xaaska Col. Qadaafi, waana xaaskisii labaad waxay u dhashay 7 ka mid ah caruurtiisa, Safia & Col. Qadaafi waxay sidoo kale korsadeen wiil & gabar lagu kala magacaabo Milad & Hanna.
1986-dii markii Mareykanku uu duqeeyey gurigii Col. Qadaafi ee magaalada Tripoli waxaa la sheegay in Hanna ay ku dhimatey weerarkaasi,laakiin waxa isa soo taraya inay nooshahay oo uu qadaafi ula jeeday sheekadaasi propaganda.
Wuxuu ku sugan yahay wadanka Al-Jeeriya halkaasi oo uu u baxsadey markii mucaaradku ay qabsadeen Tripoli.
Muxamed waa wiilka curadka ah ee Qadaafi waxana dhashay xaaskiisii ugu horeysay. Muhamed wuxuu ahaa madaxa gudiga Olypicada Liibiya, waxaa sidoo kale uu madax u ahaa shirkada Isgaarsiinta Telefoonada & Boostada Liibiiya ee maamusha adeegyada Telefoonada & Dayax gacmeedyada.
Saif Al-Islam Al-Qadaafi
Dhashay: 25 June 1972.
Lama yaqaan halka uu ku sugan yahay
Inkastoo sanadkii 2008-dii uu shaaca ka qaaday inaanay u qorshaha ugu jirin in uu awooda kala wareego Aabihiis, hadana waxaa loo arki jirey in uu yahay qofka badali kara Aabihiis.
Saif oo si wanaagsan ugu hadla Luuqada Ingiriiska wuxuu shahaada Bhd-ga ka qaatey London School of Economics.
Sanadkii 1994-tii wuxuu ka qaatey Jaamacada Al-Fateh ee Tripoli shaahada BSc ee culuunta Engineering Science, sidoo kale 2000 wuxuu shaahada MBA ka qaatey Jaamacada IMADEC University ee magaalada Vienna ee wadanka Austria.
Dhashay: 25 May 1973
Xilkiisa: Madaxweynaha xiriirka ciyaaraha Liibiya
Lama yaqaan halka uu ku sugan yahay:
Saadi waa wiilka sadexaad ee ilmaha Col. Qadaafi waana ilmaha labaad ee Safiah Farkash, wuxuu guursadey gabar uu dhaley taliyihii ciidamada Liibiya.
Saadi wuxuu ahaa ciyaartoy hore oo kubada cagta ah, wuxuu ka ciyaaray wadanka Talyaaniga gaar ahaan kooxaha heerka 1-aad Seria A, wuxuu u soo ciyaaray kooxaha Parugia 2001-2003,hal mar ayuuna u safrey, Udinese 2005-2006 hal mar ayuu u saftey, Sampadoria 2006-2007 waligiis uma safan kooxda, laakiin isagoo ka ciyaaraya weerarka waligiis Saadi sadexdaasi kooxood hal gool ma dhalin.
Dalka Liibiya gudihiisa wuxuu so ciyaarey kooxaha Al Ahli Tripoli 3 gool ayuu u dhaliyey wuxuuna u safrey 74 kulan, Al- Itihad Tripoli wuxuu dhaliyey 20 gool, waxaana uu u saftey 74 kulan.
Qaranka Liibiya ayuu sidoo kale u noqdey captain. Markii uu ciyaaraha ka fariistey wuxuu maalgalin gaaraya 100 milyan oo doolar uu ku sameeyey shirkad dhanka Filimada qaabilsan.
Lama yaqaan meesha uu ku sugan yahay
Muttasim wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Liibiya, wuxuu ahaa la taliyaha dhanka amaanka ee Abaihiis.
Muttasim wuxuu mudo ku noolaa oo musaafuris u joogay wadanka Masar ka dib markii lagu eedeeyey in uu isku dayey in uu afgambiyo Aabihiis Col. Qadaafi, laakiin goor dambe ayaa la cafiyey oo uu dalka ku soo laabtey.
Wuxuu u baxsadey wadanka Al-jeeriya markii mucaaradku qabsadeen magaalada Tripoli ee caasimada ah.
Hannibal sida walaalihiis siyaasada & ciidamada lug kula laheyn, wuxuu ahaa ka shaqeyn jirey shirkada gaadiidka badda ee qaranka Liibiya, shirkadaasi oo gacanta ku haysay soo saarista saliida.
Hannibal waxaa la sheegay in uu ku lug lahaa dhawr shilal, sanadkii 2005-tii waxaa lagu eedeeyey in uu gabar ay saaxiibo aheeeyn ku garaacay magaalada Paris, sidoo kale 2008-dii waxaa lagu xiray wadanka Switzerland ka dib markii la sheegay in uu garaacay laba qof oo shaqaale ka ahaa Hotel uu deganaa, waxaase lagu soo daayey markii dambe damiin, xarigiisii dawlada Liibiya waxay eriday safiirkii Switzerland, sidoo kale waxaa la eryey shirkadii Swis-ka isla markaana waxaa la mamnuucay in dalka Liibya la keeno badeecadaha ay soo saarto Swissterland
Dhashay 27 May 1983
Xilkiisa: Taliyaha ciidamada guutada 32-aad.
Khamis Gaddafi wuxuu ka mid ah wiilasha Qadaafi ee sida tooska ugu lug lahaa dagaaalda Liibiya, bishii February markii uu bilowdey kacdoonka wuxuu booqasho ku joogay Mareykanka, laakiin dalkiisa ayuu dib ugu soo laabtey isagoo guutadiisa ciidan ee 32-aad ay toos uga qayb qaateen ka hortagii kooxaha mucaaradka xiligii ay ka dilaaceen magaalada Benghazi
Khamiis oo tababar ciidan ku soo qaatey wadanka Ruushka waxaa kooxaha mucaaradkiu ay sheegen in uu ku dhintey duqeymihii Nato ee Liibiya bishii April laakiin warkaasi waa la beeniyey isagoo Tv-yada ka soo muuqdey booqanayana arskar dhaawac ah.
Sidoo kale mucaaradka Liibiya waxay sheegteen in 29-kii August lagu diley duqeymihii dhacay, balse arintaasi wali lama xaqiijin.
Magaalada Tripoli markii mucaaradku qabsadeen xeradii uu deganaa Khamiis waxaa laga helay 50 qof oo meyd ah oo lagu eedeeyey inay dileen ciidamadiisa.
Saif Al-Arab Al-Qadaafi
Dawlada Liibiya waxay sheegtey in Saif Al-Arab uu ku dhintey duqeyn diyaaradaha NATO u geysteen guriga Col. Qadaafi 30-kii April 2011, waxaa sidoo kale duqeyntaasi ku dhintey sadex caruur ah oo uu Qadaafi awoowe u ahaa.
Saif waxa yar ayaa laga yaqaan, waxaase uu ardey ka ahaa dalka Jarmalka jaamcad ku taal.
Aisha waa sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Liibiya waxayna gaartey darajada G/lle Sare, waxay kaloo bartey culuunta qaanuunka ee Qareenimada.
Ayesha sanadkii 2000-kii markii Ciraaq lagu soo rogay cunaqabateynta waxay booqasho ku tagtey magaalada Baqdaad iyadoo hogaaminaysa wafdi ka kooban 69 xubnood, wax yar ka hor duulaankii 2003-dii lagu qaadey Ciraaq waxay la kulantey hogaamiyihii Ciraaq Sadaam Husein.
Sidoo kale markii la qabtey Sadaam Xuseen waxay ka min noqotey koox qareeno ah oo u istaagey inay daafacaan Sadaam Xuseen.
Waxay kaloo caan ku aheyd iyadoo madax u aheyd hay’ad samafal oo lagu magacaabi jirey Wa Attassimou, taasi oo difaacaysay saxafi Muntadhar Al-Zaidi oo kabihiisa ku tuuray madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush xili uu shir jaraa’id uu ku qabanayey magaalada Baqdaad.
Milad Abuztania Al-Gadaafi
Lama hayo xiliga uu dhashay, waa wiil uu adeer u yahay oo uu Aabenimo uu u soo korsadey Col. Qadaafi, waxaa wiilkan la siiyey haybada in uu badbaadiyey Col. Qadaafi sanadkii 1986 xiligii Mareykanku ay duqeeyeen gurigiisa magaalada Tripoli.
Shaxda ama tiirka qoyska Col Qadaafi